हरियो कार्ड: के र कसरी प्राप्त गर्ने? वाहन मा हरियो कार्ड: दर्ता, वास्तविक
हरियो कार्ड - बुझाउँछ यो शब्द के हो? "हरियो कार्ड": निम्नानुसार यो, तपाईं अनुमान सक्छ रूपमा, अनुवादित। अमेरिकी, यो मा आईडी कार बीमा - विदेशी र युरोप मा। त्यसैले, यी अवधारणाहरु दुवै बुझ्न, यो ग्रीन कार्ड बारेमा थप बताउन आवश्यक छ।
सङ्कल्प № 1
पहिलो कुरा म हरियो कार्ड भनिन्छ पहिचान कागजात बारेमा बताउन चाहन्छु। यसलाई के मतलब छ? त्यसैले, अर्को शब्दमा बोल्ने मा, छैन जो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नागरिक एक निवास परमिट को एक व्यक्ति को उपस्थिति के पुष्टि गर्छ, तर एक स्थायी आधारमा त्यहाँ बस्न छ। एक व्यक्ति यो प्रमाणपत्र छ भने, त्यसपछि उहाँले अमेरिका मा काम पाउन मौका छ। चाखलाग्दो कुरा, यो कागजात मूल हरियो (1946 देखि 1964-औं गर्न) थियो, तर त्यसपछि रंग परिवर्तन भयो। तथापि, पछि 2010-उहाँले फेरि यति थियो। अब यसलाई फेरि देखिन्छ नाम मिलाउँछ। त्यसैले, अब यसलाई स्पष्ट के हरियो कार्ड छ। यसलाई प्राप्त गर्न के गर्न आवश्यकता के हो? यो जवाफ धेरै विस्तृत छ जो अर्को प्रश्न हो। तर छोटो मा, जो आवश्यक कागजात ल्याउन र सान्दर्भिक बयान पेश गर्नेछ ती यो कागजात जारी छ। र यो एकदम लामो र महंगा छ।
तयारीको लागि विधिहरू
प्राप्त एक निवास परमिट धेरै तरिकामा। जब लगभग कहिल्यै असफल मानिस लागि आवेदन सबै भन्दा राम्रो बहाना - आफ्नो परिवार संग reunited छ। तपाईं अमेरिका, आफ्नो छोरा वा छोरी रूस को क्षेत्र मा रहेका छ भएका जोडी बस्नुहुन्छ भने, र तिनीहरूले फेरि सँगै हुन चाहनुहुन्छ कि, छ, मामला एक विजेता हुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जैविक बच्चा - एक प्रत्यक्ष नातेदार, यस सन्दर्भमा कुनै पनि समस्या, हरियो कार्डको सजावट रूपमा हुनेछ, छैन भनेर।
एक नागरिक वा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नागरिक गर्न विवाह पनि एक निवास परमिट प्राप्त गर्न अवसर छ। यस्तै, साथै काम अमेरिकी देखि कर्मचारी को आवेदन मा। को अनुमति प्राप्त गर्न अन्य रोचक तरिका - यो लटरी मा जीत छ। यसलाई थप विस्तार पछि छलफल गरिनेछ। र अन्तिम तरिका - फेला गरेका शरणार्थीका लागि कागजात प्राप्त गर्न छ संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरण। सामान्य मा, धेरै मान्छे अब हरियो कार्ड रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहन्छु। यो के हो, त्यसैले किन गतिविधि वृद्धि? बस शब्द को शाब्दिक अर्थमा अन्य राज्य अमेरिका मा यो भीड भएको छ। अमेरिका को वर्ष मा एक निवास परमिट को अधिग्रहण लागि तीन लाख आवेदन प्राप्त गर्दछ। मूलतः सोधेर - भारत, फिलिपिन्स, मेक्सिको नागरिक र, पाठ्यक्रम, चीन।
को चिट्ठा बारेमा
धेरै मानिसहरू आश्चर्य: हरियो कार्ड कसरी जीत? तपाईं के गर्नुपर्छ? सुरु गर्न, म लटरी इन्टरनेट मार्फत ठाउँ लिन्छ भनेर भन्न थियो। यो अमेरिकी सरकारले वर्षेनी संगठित छ। र मुख्य लक्ष्य देश जसको निवासी अमेरिका मा धेरै सानो छ देखि प्रवास प्रोत्साहन छ। अनौठो, को पाठ्यक्रम, तर महान।
6.4 लाख भन्दा बढी मानिसहरू raffle भाग लागू गर्दा बूम, 2008 मा अवलोकन। सामान्य मा, सहभागीहरू बारेमा लाख दस (सहित परिवारका सदस्यहरूले) बाहिर आए। इन्टरनेटमा आफूलाई लटरी को प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने धेरै वेबसाइटहरु छन्। त्यसैले, पहिलो caveat। त्यहाँ लटरी को कुनै प्रतिनिधि हो! यो केवल एकल आधिकारिक अमेरिकी वेबसाइट जीत सम्भव छ। र यो मा दर्ता निःशुल्क छ। धेरै साइटहरु fraudsters colorfully तिनीहरूलाई कसरी मार्फत हरियो कार्ड जीत भन्छु, तर यो एक शुल्क को लागि, को पाठ्यक्रम छ। त्यसैले तिनीहरू बस अमेरिका उत्प्रेरित गर्न चाहनेहरूको मानिसहरूलाई "वेल्डेड छन्।"
त्यसैले, के हरियो कार्ड स्पष्ट दिन्छ। यो अमेरिका बस्न मौका र काम - लोभ्याउने छ। मान्छे को माथि विभाग अपेक्षाकृत सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने वर्णन गरिएको छ। तर यो एक थप nuance टिप्पणीमा आवश्यक छ। यो कागजात व्यक्ति जो अद्वितीय कुरा जारी गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, खेल, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान वा कला को क्षेत्रहरू असाधारण क्षमता छ जो एक नागरिक। वा उच्च शैक्षिक डिग्री संग विशेषज्ञहरु। यो पनि संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै लोकप्रिय छ कि क्षेत्र, कम से कम दुई वर्ष को अनुभव संग उच्च शिक्षा संग पेशेवरों र कुशल कार्यकर्ता समावेश छ।
धार्मिक तथ्याङ्कले पनि यो सूची, साथै अमेरिकी सरकार लागि काम गर्ने मान्छे समावेश छन्। र को पाठ्यक्रम, हामी $ 500 हजार देखि लगानी गर्ने र एक लाख अमेरिकाको अर्थव्यवस्था र कम्तिमा 10 जब सिर्जना लगानीकर्ताले बारेमा भूल गर्न सक्दैन।
सङ्कल्प2№
अब यो कार मा हरियो कार्ड यस्ता कागजात बारे बताउन आवश्यक छ। रेल वा बस - विमान यात्रा गर्न रुचि गर्ने, केही कसैले। तर अधिकांश मानिसहरू आफ्नै जुनसुकै ठाउँमा जान रुचाउँछु। त्यो कार द्वारा छ। तर यो एक बीमा नीति आवश्यक छ! त्यसैले उहाँले हरियो कार्ड भनिन्छ। र यो कुनै पनि विदेशी देशमा मान्य छ। वास्तवमा, यो कागजात CTP को एक एनालग छ। यो कागजात प्राप्त गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, आफ्नो उपस्थिति बिना जहाँ तपाईं जान चाहने देश एक भिसा प्राप्त गर्न सक्षम हुने छैन।
किन यो कागजात?
कार मा हरियो कार्ड भिषा प्राप्त गर्न मात्र होइन आवश्यक छ। उनको अझै प्रवेश मा र बाहिर निस्कन दुवैलाई, सीमा मा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। त्यसैले यो व्यक्ति युरोपेली संघ रहन चाहन्छ जुन बेलामा अवधि मा दर्ता गर्न आवश्यक छ। केही निर्णय 15 दिनको लागि यो गर्न, र त्यसपछि तिनीहरूले कागजात समाप्त भएको छ याद गर्ने सीमाना गार्ड, एक समस्या छ।
पनि युरोप मा पाङ्ग्रा पछि स्थित पहिचान, प्रमाणित गर्न, विदेशी राज्य संख्या संग कार रोक्न सक्छ, र अन्य कार बसेर। बीमा पनि अधिकार र पासपोर्ट बाहेक सोध्न सक्नुहुन्छ।
र पाठ्यक्रम, यो कागजात एक दुर्घटना को घटना मा अपरिहार्य छ। वास्तवमा, हरियो कार्ड दुर्घटनामा विदेशी कार को मरम्मत को लागत देखि व्यक्ति सुरक्षित राख्दछ।
केही शब्दहरू दर्ता प्रक्रिया सन्दर्भमा भने गर्नुपर्छ। अर्डर एक साधारण र विदेशी राहदानी आवश्यक हुनेछ नीति किन्न मा (धेरै कम्पनीहरु छ एक कुरा को पर्याप्त, तर यो सुरक्षित र प्ले दुवै कागजात यसलाई लिन राम्रो छ)। र को पाठ्यक्रम, वाहन दर्ता कागजात (वा दर्ता को प्रमाणपत्र)। एक वर्ष - नीति न्यूनतम अवधि 15 दिन अधिकतम गर्दा हो। खैर, एक व्यक्ति 16 दिनको लागि विदेश जान्छ भने बीमा एक महिनाको लागि हुन हुनेछ जारी गर्न। यो खातामा लिन लायक छ।
त्यसैले, एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी मा कार मा हरियो कार्ड खरीद। तर कुनै पनि - केवल एक यसलाई जारी गर्ने अधिकार छ। र सबै रूसी संघ मा, त्यहाँ दस यस्तो संगठन हो। यी "ग्रीन कार्ड" सिस्टम को सदस्य हो भनेर कम्पनीहरु छन्। केही संगठन विचार नत्याग्ने निर्णय गरेका छौं। यो कारण पनि दायित्व सीमा उच्च थियो।
पहिलो कम्पनी - एक "अल्फा बीमा"। दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय - "एफ ए सी"। तेस्रो - "21"। चौथो - "कं ZHASO"। सामान्य मा, ती सबै यो मूल्य छैन सूची। तर प्रत्येक कम्पनी तपाईं कुनै पनि विश्वास गर्न सकून् भनेर, एकदम प्रसिद्ध र राम्रो नाम छ। छैन धेरै मौलिक, जहाँ हरियो कार्ड जारी गरिनेछ। सकारात्मक समीक्षा सबै कम्पनीहरु।
थाह लायक छन् कि रोचक nuances
धेरै मानिसहरू यो कागजात को लागत मा रुचि छन्। 2015 को अन्त्यमा यो 15 दिनको लागि बारेमा 2500 rubles खर्च। तर गणना व्यक्तिगत प्रत्येक समय बनेको छ। समीक्षा कार्ड दुई हप्ता यात्रा र योजना भने, पाठ्यक्रम, लामो समय को लागि सजाने सल्लाह छन्।
खैर, केही समीक्षा अनुसार सीमा कागजात प्राप्त। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर सबैका लागि र सधैं छैन। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति जर्मनी जाने थियो, त्यसैले यो गर्न सकिन्छ। जर्मन वाणिज्य दुतको कार्यालय मा भिसा जारी गर्न हरियो कार्ड प्रस्तुत हुनुपर्छ।
खैर, पहिले नीति हात द्वारा बनाउनुभयो भने, त्यसपछि अप्रिल को पहिलो वर्ष अन्तिम अघि 2014 मा, संग मात्र कम्प्युटर डिजाइन शुरू। र बीमा निर्दिष्ट सबै डाटा, अब डेटाबेस मा सिधै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। के यो पनि धेरै सुविधाजनक छ।
अझै धेरै इन्टरनेट मार्फत नीति आदेश चयन गर्नुहोस्। साँच्चै, आवश्यक छैन, यो किन्न कही जान। दर्ता प्रक्रिया तपाईं मूल बीमा लागि जाने र गर्न सक्छन् अनलाइन, तर यहाँ मात्र अझै कार्यालय जान छ।
सिविल कोड को धारा 196। सामान्य सीमा अवधि
सरकार को शक्तिहरु
कूटनीतिक कोर: संरचना, कार्य, विशेषाधिकार
सुविधा र डिजाइन सिफारिसहरू सूची: निवास परमिट को विस्तार को लागि कागजातहरू
VAZ-2101, जनरेटर: तारिण आरेख, मरम्मत, प्रतिस्थापन
Midshipmen - यो पंथ फिलिम को बस वर्ण हो
निकास लागि वाहिनी छनौट। महत्त्वपूर्ण के छ: सौन्दर्य, जीवन वा सुरक्षा?
को भाकल कसरी लिने?
Morphological विशेषताहरु: परिसर बारेमा स्पष्ट
कसरी र कद्दू रोपेर कहिले
यो श्रृंखला "राजा र भविष्यवक्ताहरूलाई": अभिनेता, भूमिकाको र फोटो
परी कथा "Puss, कुखुराको भाले र एक फ्याउरो।" ध्यान दिएर पढ्न सिक्दै
पहाड Demerdzhi: विवरण, फोटो, रोचक तथ्य